Dowladda Somalia ma ka jawaabi doontaa Meel ka dhaca Sharafta Qaranimadda uu u gaystay Afhayeenka Kenya,? – Hornafrik Media Network
Dowladda Somalia ma ka jawaabi doontaa Meel ka dhaca Sharafta Qaranimadda uu u gaystay Afhayeenka Kenya,?
By HornAfrik	 On Aug 24, 2017
Afhayeenka Dawladda Kenya, Eric Kiraithe mar uu u jawaabayey siyaasiyiinta Mucaaradka Dalka kenya oo qaarkood ku dhawaaqeen in dalka loo kala qeybiyo laba dawladood maadaama sida ay sheegeen ka quusteen doorasho cadaalad ah dalka Kenya inay ka dhacdo ayaa Afhayeenka Dawladda Kenya si jees jees leh ugu sheegay in haddii ay doonayaan dal burbursan oo ka kooban dawladdo madaxdoodu wax kasta isku haystaan, ku tartamayaan in ay aadaan dalka Somalia maadaama sida uu sheegay hab dhaqankaasi laga yaqaano Somalia iyo Dalka Libya.
Inkasta oo Afhayeenka dawladda Kenya Eric Kiraithe waxa uu Somalia ka sheegay jiraan, Somalia-na hadda ku sugan tahay sida wadamadda Deriska ah la rabeen oo ka shaqeeyeen haddana in afhayeenka Kenya ku canbaareynayo kuna aflagaadeynayo sida ay dawladda Somalia ka dhigeen waxay muujinaysaa wax xushmad ah haba yaraatee in aysan dawladda Kenya u heynin dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dawladaha iska soo horjeedda oo madaxdoodu qoorta iskula jiraan waxaa kamid ah Dawladda Jubaland oo dawladda Kenya si qasab ah uga dhistay Soomaaliya!
Dowladda Somalia hadda ka jirta oo lagu tiriyo inay awoodeeda ugu badan isugu gaysay Warbaahinta iyo Baraha Bulshadda ayaan la ogayn siday uga jawaabi doonto Hadalka Sharaf Dilka ah ee Kenya ay ugu tusaalaysay Mucaaradkeeda in Somalia ay tahay Dal kala qoqoban oo ay is haystaan Madaxdeedu.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ku eedeysay Xoghayihii xilka laga qaaday inuu faragalin ku hayo.